Motherboard ​တိုင်း​ကို ​ဝယ်​သင့်​သ​လား ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
phoe htaung July 21, 2012 at 12:44 PM
san July 21, 2012 at 1:54 PM
​ကျွန်​တော့်​အ​မေ ​ကျွန်​တော့်​ဘေး​နား ​ရောက်​နေ​ပြီး​ဖြစ်​တဲ့​အ​တွက်​ကြောင့် ​ကျွန်​တော့်​အ​တွက် ​ဘာ​မှ ​မ​လို​အပ်​တော့​လောက်​အောင်​ပြည့်​စုံ​နေ
​ပါ​ပြီ ​ဆို​တဲ့​စ​ကား​ကို ​ရင်​ထဲ​ထိ​အောင်​ခံ​စား​ရ​တယ်။​မိ​ဘ​ကို ​အ​လေး​ပေး​တဲ့​သူ ​ဘယ်​တော့​မှ ​မ​ဆင်း​ရဲ​ဘူး။​သူ​တော်​ကောင်း​တွေ​နဲ့​ဘဲ​တွေ့​ရ​မှာ​ပါ။​အ​စ​စ ​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်။
phoe htaung July 21, 2012 at 2:49 PM
phone win July 21, 2012 at 4:05 PM
​ကို​အောင်​ကျော်-아로마 July 21, 2012 at 10:55 PM
​ကျေး​ဇူး​ပါ​ပဲ ​ကို​ညီ... ​အ​မြဲ​တမ်း ​အား​ပေး​နေ​ပါ​တယ်...
​မောင်​အောင်​ဇေ​လတ် July 21, 2012 at 11:56 PM
​ကို ​ညီ​နေ​မင်း ​ကို​တော့ ​ဘယ်​အ​ချိန်​ဖြစ်​ဖြစ် ​အား​ကျ​တယ် ​ဗျာ
​အာ​ကာ​ဖြိုး(​နည်း​ပ​ညာ) July 22, 2012 at 12:04 AM
​အ​ကို​ရေ............ ​စ​ကား​များ​များ​ပြော​လို့ ​အ​မှား​တာ​မျိုး ​အ​ဖြစ်​စေ​ချင်​ပါ​ဘူး ​အ​ကို​ရေး​ထား​တဲ့ ​အ​ထဲ​မှာ ​သံ​ဃာ​တော်​တွေ ​အ​ကြောင်း ​ဆို​ထား​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ ​အ​ကို့ ​ဆို​လို​တာ ​က​ရု​ဏာ ​စိတ်​နဲ့ ​ဆို​တာ ​သိ​ပါ​တယ် ​အ​ကို​ရေး​ထား​သ​လို​ပဲ ​ဖြစ်​နေ​တာ​လဲ ​အ​များ​ကြီး​ပါ ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​မ​ဝေး​လှေ​သး​တဲ့ ​ကာ​လ​တစ်​ခု​က ​အင်း​ကျွန်​တော် ​ထွေ​အုပ်​မှာ ​တာ​ဝန်​ထမ်း​ဆောင်​နေ​စဉ်​တုန်း​ကာ​လ ​က ​အ​ဖြစ်​အ​ပျက်​လေး ​တစ်​ခု​ပါ ​တည့်​တည့်​ပြော​ရ​ရင် ​ဦး​ခင်​ညွှန့် ​မ​ကျ​မီ​ကာ​လ​က ​က​ပေါ့ ​ဘာ​ဖြစ်​သ​လဲ ​ဆို ​ပ​ရိ​ပ​တ္တိ ​စာ​သင်​သား ​ကိုယ်​တော်​တွေ ​ကိုယ်​ရင်​တွေ ​အောင်​ဆန်း​ကွင်း​မှာ ​လာ​လာ ​ပြီး ​ဘော​လုံး​ကန်​ကြ​ပါ​တယ် ​ဒါ​ကို ​ဦး​ခင်​ညွှန့်​က ​သိ​တဲ့ ​အ​ခါ ​သံ​ဃ​နာ​ယ​က ​ထံ​ကို ​အ​သိ​ပေး ​အဲ ​တိုင်​တယ်​ပြော​တာ ​ရှင်း​ပါ​တယ် ​အဲ​ခါ​မှာ ​သံ​ဃ​နာ​က​ယ ​အ​ဖွဲ့​က ​သံ​ဃာ​တော်​တွေ ​အ​တွက် ​မ​ထိ​ခိုက် ​မ​နစ်​နာ​စေ​လို​တာ​ကြောင့် ​ဖြေ​ကြား​ခဲ့​တာ​က ​စာ​သင်​သား ​ရ​ဟန်း​တော်​များ​ဟာ ​တစ်​နေ့​တာ​ကာ​လ​ပတ်​လုံး ​စာ​အံ ​ကျက်​မှတ် ​ရ​တာ ​ပင်း​ပန်း ​နုံး​ချိ ​ကြ​ပါ​တယ် ​ခောတ်​က​လ ​အ​လိုက် ​ကိုယ်​လက် ​လှုပ်​ရှား​တဲ့ ​ကျမ်း​မာ​ရေး​အ​တွက် ​ပြု​သင့်​တဲ့​အ​ကြောင်း​ရယ် ​ဒီ​လို ​လုပ်​တာ​ဟာ ​ဝိ​နည်း​တော်​ကို ​ဆန့်​ကျင် ​ရာ ​ရောက်​သော်​လည်း ​ဥ​ပ​မာ ​သစ်​ပင်​တစ်​ပင်​မှာ ​ခိုင်​မာ​မြဲ​မြံ​တဲ့ ​အ​နှစ်​ရှိ​သ​လို ​မ​ခိုင်​မာ​တဲ့ ​အ​ကာ​လဲ ​ရှိ​ပါ​တယ် ​တဲ့ ​အ​ခု​လဲ ​ဒ​ကာ​တော် ​တို့ ​အ​နေ​နဲ့ ​ဒီ​သ​ဘော​ကို ​ရှု​မြင်​ပြီး ​နေ​ရာ​တိုင်း​မှာ ​စုန်း​ပြူး​ဆို​တာ ​ရှိ​တယ် ​ဆို​ပြီး ​ရှင်း​လင်း ​မိန့်​ကြား​ခဲ့​ပါ​တယ် ​နောက် ​အ​ခု​ဆို​လို​ထား​တာ​အ​ရ ​ပြော​စ​ရာ ​အဲ ​အ​ငြင်း​ပွား​ဖွယ်​ရာ ​တစ်​ခု​ခု ​ဖြစ်​သွား​စ​ရာ ​ရှိ​တာ​က ​ဝိ​နည်း​တော် ​နဲ့ ​ပက်​သက်​ပြီး ​ဘု​ရား​ရှင် ​ကိုယ်​တော် ​တိုင် ​မိန့်​ကြား​ခဲ့​တဲ့ ​အ​ချက်​တစ်​ချက်​ရှိ​ပါ​တယ် ​ဒါ​က ​သေး​ငယ်​တဲ့ ​ဝိ​နည်း​တေါ​ကို ​ပယ်​လို​က ​ပယ်​နိုင်​၏ ​ဆို​တဲ့ ​မိန့်​ကြား​ချက်​ပါ ​ဒီ​အ​ချက် ​က ​တစ်​ဦး​တစ်​ယောက် ​အဲ ​သံ​ဃာ​တော်​တစ်​ပါး​က 227 ​သွယ်​သော ​သိ​က္ခာ​ပုဒ် ​တွေ​ထဲ​က ​တစ်​ချက်​ကို ​သေး​ငယ်​တယ်​လို့ ​ယူ​ဆ​ပြီး ​ပယ်​ရှား​မယ် ​ဆို​ရင် ​ရ​နေ​ပြန်​ပါ​တယ် ​သံ​ဃာ ​အ​ဖွဲ့​အ​စည်း​တစ်​ခု​လုံး​ရဲ့ ​သ​ဘော​တူ​ညီ​ညွတ်​မှု ​နဲ့​မှ ​ဖယ်​ရှား​လို့ ​ရ​တာ ​မျိုး​မ​ဟုတ်​ဘဲ ​တစ်​ဦး​ချင်း​စီ ​ရဲ့ ​ခံ​ယူ​ရှု​မြင်​မှု​အ​ရ ​ကွာ​ခြား​နိုင်​ပါ​တယ် ​ဒါ​ဟာ ​သံ​ဃာ​တော်​တွေ ​ကြား​မှာ ​အ​ငြင်း​ပွား​ဖွယ်​ရာ ​အ​ချက်​ပါ​ပဲ ​အစ်​ကို ​ဆို​လို​သ​လို​တွေ ​ဖြစ်​နေ​တာ ​ဒု​နဲ့​ဒေး​ပါ ​မြင်​နေ​ရ​တာ​ပဲ ​တွေ့​နေ​တာ​ပါ​ပဲ ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ဘယ်​လို ​ခံ​ယူ​တယ်​ဆို​တာ ​သူ​နဲ့​သာ ​သက်​ဆိုင်​မှာ​ပါ ​ဘေး​က​မြင်​သူ​တစ်​ယောက် ​အ​နေ​နဲ့ ​ပြော​ဖို့ ​ဆို​တာ ​မ​လွယ်​တဲ့ ​အ​ရာ​ပါ ​ဘယ်​သူ​မ​ဆို ​ကိုယ်​လမ်း​ကိုယ်​ဖောက်​နေ​ကြ​တာ​ပါ​ပဲ ​ဒါ​ကို ​ဘာ​ဖြစ်​တယ်​ညာ​ဖြစ်​တယ် ​ပြော​မိ​ရင် ​အ​ပြော​ခံ​ရ​သူ​တွေ ​အ​နေ​နဲ့ ​ဆို​လာ​နိုင်​ပါ​တယ် ​မင်း​က​ဘယ်​လောက် ​မှန်​သ​လဲ ​ဆို​ပြီး​တော့​ပေါ့ ​ဒါ​တော်​တော် ​ကြောက်​စ​ရာ ​ကောင်း​တဲ့ ​မေး​ခွန်း​ပါ ​ထေ​ရ​ဝါ​ဒ ​စစ်​စစ်​ဖြစ်​ဖို့ ​ဆို​တာ ​ခု​ချိန်​ကာ​လ​မှာ ​ဝိ​နည်း​ထိုရ် ​ဖြစ်​မှ​ပဲ ​ဒါ​သေ​ချာ​တယ်​ပြော​ရ​မယ့် ​အ​နေ​အ​ထား​ပါ ​တ​ကယ်​လဲ ​ယိုင်​နဲ့​နေ​ပါ​ပြီ ​ဥ​ပ​မာ ​အင်း​အ​ခု​ဥ​ပ​မာ​ကို ​စော်​ကား​တယ်​လို့ ​မ​မြင်​စေ​ချင်​ပါ​ဘူး ​အစ်​ကို ​အ​ခြား​ဆိုဒ်​တစ်​ခု ​အ​ဖြစ် ​လုပ်​ထား​သ​လို​ပေါ့ ​ဒီ​လို​ပ​ညာ​ရပ်​တွေ​က ​သ​င်္ဂါ​ယ​နာ​တင်​တဲ့ ​နေ​ရာ​မှ ​မှ ​မ​ပါ​တာ ​ဒီ​ပ​ညာ​ရပ်​တွေ​ကို ​အ​ခု ​ပြော​နေ​တဲ့ ​ကျွန်​တော်​ကိုယ်​တိုင်​လဲ ​တော်​တော်​ထဲ​ထဲ ​ဝင်​ဝင် ​တတ်​ကျွမ်း​ပါ​တယ် ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အ​ထက်​က​ပြော​ခဲ့​သ​လို​ပဲ ​ဘယ်​လို​ခံ​ယူ​သ​လဲ ​ဆို​တာ​ပေါ် ​မူ​တည်​တာ​ပဲ ​မ​ဟုတ်​လား ​အစ်​ကို ​ကိုယ်​တိုင်​တောင်​မှ ​ထေ​ရ​ဝါ​ဒ ​စစ်​စစ် ​မ​ဖြစ်​သေး​ဘဲ ​ခု​လို ​ပြော​တာ​တွေ​က ​အစ်​ကို ​စေ​တ​နာ​ထား ​ဝေ​ဖန်​တာ​က ​ရှုံ့​ချ​သ​လို ​ဖြစ်​နေ​တယ် ​ကဲ့​ရဲ့​သ​လို ​ဖြစ်​နေ​တယ် ​လူ​သား​တစ်​ဦး ​အ​နေ​နဲ့ ​ပု​ထု​ဇဉ်​တွေ​ပဲ​ဆို​တော့ ​လော​ကီ ​လော​ကု​တ္တ​ရာ ​နှစ်​ဖက်​လုံး​ကို ​လေ့​လာ ​လိုက်​စား​တာ ​မ​ဆန်း​ပါ​ဘူး ​ဒါ​ကို ​အ​ပြစ်​မြင်​လို့ ​မ​ရ​ပါ​ဘူး ​ဘယ်​သူ​မှ ​မဂ်​ဖို ​မ​ဆိုက်​ရောက်​ကြ​သေး​တော့ ​မှား​တာ ​မှန်​တာ ​ရှိ​ကြ​မှာ​ပဲ​လေ ​အ​ကို​ပြော​တဲ့ ​စ​ကား​လုံး​လေး​တွေ ​အ​နှစ်​ပါ​ပါ​တယ် ​ကောင်း​ပါ​တယ် ​စေ​တ​နာ ​ထား ​ပြော​မှန်း​လဲ ​သိ​ပါ​တယ် ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အ​ကို ​ပြော​နေ​ရင်း ​မှား​မိ​မှာ ​စိုး​ရိမ်​လို့​ပါ
​အစ်​ကို ​အ​ရင်း​တစ်​ယောက်​လို ​ချစ်​ခင်​လို့ ​ဒီ​ကော့​မက်​ပေး​တာ​ကို ​နား​လည်​ပေး​ပါ ​ကျွန်​တော့်​ကို​လဲ ​ပြော​ဆို ​ဆုံး​မ​နိုင်​ပါ​တယ် ​ကောင်း​စေ​လို​လို့ ​ပြော​တာ​ကို ​ခံ​ယူ ​ကြား​နာ ​ချင်​လျှက်
​ဇင်​မင်း​ထွန်း July 22, 2012 at 8:29 AM
afallenleaf July 24, 2012 at 6:38 PM
​အစ်​ကို​ရေ ​ဘယ်​သူ​တွေ​ဘာ​ပြော​ပြော ​ဂ​ရု​မ​စိုက်​ပါ​နဲ့...​အစ်​ကို​ဟာ ​အ​များ​အ​တွက်​ကောင်း​ကျိုး​ပြု​တဲ့​အ​လုပ်​လုပ်​နေ​တာ​မို့ ​အစ်​ကို့​ကို ​လေး​စား​အား​ပေး​နေ​တဲ့​သူ​တွေ ​အ​များ​ကြီး​ရှိ​နေ​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျာ...
​ဒေါင်း​မ​ရ​ဘူး​ခင်​ဗျာ......။ July 24, 2012 at 11:24 PM
​အ​ခု​အ​ချိန်​ထိ့​ကို ​မ​ရှိ​မ​ဖြစ် ​လို​အပ်​ပြီး ​အား​ပေး​လျှတ်​ပါ
amu July 25, 2012 at 12:52 AM
Classic Electrice July 28, 2012 at 3:02 AM
zarni htun July 28, 2012 at 7:56 AM
​မ​ရှိ​မ​ဖြစ် ​လို​အပ်​ပြီး ​အား​ပေး​လျှတ်​ပါ
mgpanyar July 29, 2012 at 10:58 AM
}}​ထေ​ရ​ဝါ​ဒ ​စစ်​စစ်​ဖြစ်​ဖို့ ​ဆို​တာ ​ခု​ချိန်​ကာ​လ​မှာ ​ဝိ​နည်း​ထိုရ် ​ဖြစ်​မှ​ပဲ ​ဒါ​သေ​ချာ​တယ်​ပြော​ရ​မယ့် ​အ​နေ​အ​ထား​ပါ ​တ​ကယ်​လဲ ​ယိုင်​နဲ့​နေ​ပါ​ပြီ}}.................​အင်း ​ဒု​က္ခ​ပဲ..........
​ဒီ​စ​ကား​ကို ​ဘယ်​လို​အ​ဓိ​ပ္နါယ်​နဲ့ ​ပြော​တာ​လဲ​ဆို​တာ​တော့ ​မ​သိ​ပါ​ဘူး.................
​ခု​လို​ပြော​တဲ့ ​အာ​ကာ​ဖြိုး(​နည်း​ပ​ညာ)​ဆို​တာ ​ဒ​ကာ​လေး​လား? ​ဒ​ကာ​ကြီး​လား? ​ဘယ်​သူ​လည်း​တော့ ​မ​သိ​ပါ​ဘူး..... ​ဒါ​ပေ​မဲ့ ​အာ​ကာ​ဖြိုး(​နည်း​ပ​ညာ)​သိ​ထား​ဖို့​ရာ​က
​ထ​ရ​ဝါ​ဒ​ဆို​တဲ့​စ​ကား​ကို ​နား​လည်​အောင်​တော့ ​သေ​သေ​ချာ​သေ​ချာ​လေ့​လာ​သင့်​တယ်​လို့ ​ထင်​ပါ​တယ်.............​အင်း ​ဦး​ဇင်း​အ​နေ​နဲ့​က​တော့ ​ဒီ​လောက်​ပဲ ​ပြော​ပါ​တော့​မယ်.....
​ဒီ​ဆိုက်​ကို ​ဦး​ဇင်း​အ​နေ​နဲ့ ​ခ​ဏ​ခ​ဏ​ဝင်​ရောက်​ဖြစ်​ပေ​မဲ့......​ခု​လို​ကွန်​မန့်​ပေး​တာ​ကို ​တ​ခါ​မှ ​မ​လုပ်​ဖူး​ပါ​ဘူး......​ခု​ဟာ​က ​မ​နေ​နိုင်​တော့​လို့ ​ကွန်​မန့်​ပေး​ရ​တာ​ပါ.......
​ထေ​ရ​ဝါ​ဒ​နဲ့ ​ထေ​ရ​ဝါ​ဒ​ဘာ​သာ​ကို ​သေ​သေ​ချာ​ချာ​လေ့​လာ​ပီး​မှ ​ခု​လို​ပြော​သင့်​တယ်​ထင်​လို့​ပါ.....
​ပီး​တော့ ​ဝိ​နည်း​ဓိုရ်(​တ​ကယ်​က ​ဝိ​နည်း​ထိုရ်​မ​ဟုတ်​ပါ။)​က​လည်း ​ထေ​ရ​ဝါ​ဒ​စစ်​စစ်​ဖြစ်​တာ​နဲ့ ​ဘာ​မှ​မ​ဆိုင်​ဘူး.............​ဝိ​နည်း​ဓိုရ်​ဖြစ်​မှ ​ထေ​ရ​ဝါ​ဒ​စစ်​စစ်​ဖြစ်​မယ်​ဆို​ရင်​တော့ ......
​ဆက်​ရေး​နေ​ရင်​လည်း ​တစ်​သက်​လုံး​ပီး​တော့​မှာ ​မ​ဟုတ်​ပါ​ဘူး..........
zawlat July 31, 2012 at 11:50 AM
​ရေး​ချင်​တာ​ရေး​ကြ​ဟေ့​ဒို့ ​က​တော့ ​ဒေါင်း​မှာ​ဘဲ ..​တင်​ပေး​တဲ့ ​အ​တွက်​ကျေး​ဇူး​တင်​ပါ​တယ်​ဗျ
minoo August 4, 2012 at 9:01 PM
​သင်​တန်း​မ​တဲ့​ကျ​နော်​တို့ ​လို ​ဆင်း​ရဲ​သား​တ္န​အေ​တ္နက် ​ဆ​ရာ့​ရဲ့ ​ပ​ညာ​မျှေ​ဝ​ချင်း​ဟာ ​အား​ဆေး​ပါ​ပဲ​ဆ​ရာ ​ကျန်​တော်​က​တော့ ​ဆ​ရာ​တို့ ​လို ​ဆ​ရာ​တ္န​ရှေိ​မှ ​လေ့​လာ​ခ္နင့်​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ်​ခင်​ဗျာ ​ဆ​ရာ​တို့ ​လို​လူ​မျိုး​တ္န​ကေို ​အ​မြဲ​တန်း​လေး​စား​လျှက်​ပါ။ ​အ​စဉ်​ထာ​ဝ​ရ​လေး​စား​လျှက်။ ​မင်း​မင်း​ဦး။
reveal mind August 5, 2012 at 3:35 AM
​အစ်​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ဟာ ​ဘယ်​သူ​တွေ​ဘာ​ပြော​ပြော ​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​အ​တွက် ​အင်​မ​တန်​အ​ဖိုး​တန်​တဲ့ ​ဆိုဒ်​တစ်​ခု​ကို ​ကိုယ့်​အား​ကိုယ်​ကိုး ​ပြီး​ထူ​ထောင်​နိုင်​ခဲ့​တဲ့ ​စေ​တ​နာ​ရှင် ​အစ်​ကို​တစ်​ယောက်​ပါ။​မြန်​မာ​နိုင်​ငံ​ကွန်​နက်​ရှင်​နဲ့ softwar ​တွေ upload ​တင်​ပေး​နေ​တဲ့ ​အစ်​ကို့​ရဲ့​စေ​တ​နာ​ဟာ ​အ​ရမ်း​လေး​စား​စ​ရာ​ကောင်း​ပါ​တယ်​ဗျာ။​အစ်​ကို​တန်​ဖိုး​ထား​တဲ့ ​အစ်​ကို့ ​မေ​မေ​လည်း ​အ​သက်​ရာ​ကျော်​ရှည်​ပြီး ​စိတ်​ချမ်း​သာ​မှု​အ​ပေါင်း​နဲ့​ပြည့်​စုံ​ပါ​စေ​လို့ ​ဆု​တောင်း​ပေး​ပါ​တယ်​ဗျာ။
D2 August 5, 2012 at 7:18 PM
ko zay August 10, 2012 at 8:00 PM
​ဒို့​က​လဲ ​ဘယ်​သူ​တွေ​ဘယ်​လို​မြင်​မြင် ​သင်​ပေး​သ​မျှ​ပ​ညာ​တွေ ​တင်​ပေး​သ​မျှေ​ဆာ့​ဝဲ​တွေ ​ယူ​မှာ​ပဲ ​ဒေါင်း​မှာ​ပဲ ​သင်​ပေး၊ ​တင်​ပေး ​တဲ့ ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ကို
​အ​မြဲ​လေး​စား ​အား​ပေး​လျှက်​ပါ ​ဒီ​ထက်​ပို​အောင်​မြင်​ပါ​စေ။
Paoh Pay August 21, 2012 at 11:51 AM
​အား​ပေး​လျှက် ​အား​ကိုး​လျက်​ပါ ​ကို​ညီ​နေ​မင်း ​အ​မြဲ​ထောက်​ခံ​နေ​မယ် ​ကို ​ညီ​နေ​မင်း​ဒီ​ထက်​မ​က ​အောင်​မြင်​ပါ​စေ ​လို့ ​အ​မြဲ​ဆု​တောင်း​ပေး​ပါ​တယ်....
​ညောင်​ကိုင်း​ရွာ August 21, 2012 at 5:42 PM
​ကျွန်​တော်​က​တော့ ​တော​က​နေ​ရန်​ကုန်​မှာ​လုပ်​လုပ်​နေ​တဲ့ ​သူ​ပါ..​အင်​တာ​နက်​ဆိုင်​မှာ​အ​လုပ်​လုပ်​ပါ​တယ်...​ဒါ​ပေ​မယ့် ​သင်​တန်း​တွေ​ကို​တစ်​တန်း​ပြီး​တစ်​တန်း​မ​တတ်​နိုင်​ပါ​ဘူး..​ဒါ​ကြောင့် ​အ​လုပ်​လုပ်​ရင်း..​အ​လ​ကား​သုံး​ရ​တဲ့ ​အ​တွက်..​အင်​တာ​နက်​က​ပဲ​လေ့း ​လာ​ရ​တယ်..​အဲ​ဒီ​ထဲ​မှာ​တော့ ..​အ​ကို့ ​ဆိုဒ်​ကို​တ​ကယ်​အား​ကိုး​တာ​ပါ..​စာ​အုပ်​တွေ​ကို​ဒေါင်း..​စော့ ​ဝဲ​တွေ​ကို​ဒေါင်း..​စမ်း​လိုက်..​လုပ်​လိုက်​နဲ့ ​ပ​ညာ​ယူ​နေ​ရ​တာ​ပါ..​အဲ​ဒါ​ကြောင့် ​ကို​ညီ​နေ​မင်း​ကို​အ​ရမ်း​ကို​ကျေး​ဇူး​တင်​နေ​ပါ​တယ်...​ဘယ်​သူ​တွေ​ဘာ​ပဲ​ပြော​ပြော​အ​ကို​က​ကျွန်​တော်​ရဲ့ ​ကျေး​ဇူး​ရှင်​ပါ...​အ​ကို..​ကျန်း​မာ​ချမ်း​သာ​စွာ​နဲ့ ...​လို​တိုင်း​တ​ရ​နိုင်​ပါ​စေ​လို့ ..​ဆု​တောင်း​ပေး​ပါ​တယ်
jilllove.jjj September 1, 2012 at 3:37 AM
​ဟုတ်​ကဲ့​ပါ ​အ​ကို ............
​ကျွှန်​တော်​လဲ ​အ​ဝေး​ရောက်​နေ​တာ​ဆို​တော့ ​ကိုယ့်​ကို ​လမ်း​ညွန်​ပေး​မဲ့​သူ​လဲ ​မ​ရှိ
​မေး ​မယ်​ဆို​လို့​အ​ကို​တစ်​ယောက်​တည်း​ရှိ​တာ .. ​နိုင်​ငံ​ခြား​ရောက်​စ​ဆို​တော့
ZAYAR LWIN September 22, 2012 at 12:49 AM